‘एक दिन विद्यार्थी नआउदा पनि कारण पत्ता लगाउने संयन्त्र बनेको छ’ NewsButwaltoday
रुपन्देहीको सैनामैना पर्रोहा परमेश्वर माध्यमिक विद्यालय २०३१ सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो । विद्यालयमा अहिले बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म करिब २ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गर्दछन् । उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापकको रुपमा नेत्रलाल पुरी रहेका छन् । २०७७ सालमा सैनामैना नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकको रुपमा पुरस्कृत गिरीले विद्यालयलाई २०७७ सालमा सर्वोत्कृष्ट र २०७८ सालमा उत्कृष्ट विद्यालयको पुरस्कार दिलाएका छन् ।
विद्यालय पालिका र जिल्लाको मात्रै होइन देश कै नमुना विद्यालय बन्ने होडमा अगाडी बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा परिचित यो विद्यालयमा प्राविधिक विषय बाहेकका अरु सबै विषय अध्ययन गर्न पाईन्छ । प्रस्तुत छ, कसरी विद्यालय अभिभावकको मन जित्दै उदाहरणीय बनिरहेको छ ? नमुना विद्यालय बनाउन कसरी विद्यालयले योजनाहरु बनाइरहेको छ ? भन्ने विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेत्रलाल पुरीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
तपाईको विद्यालयलाई कसरी चिनाउनु हुन्छ ?
हाम्रो विद्यालय पहिला शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको संगम स्थल हो । यहाँ विद्यार्थीले रोजेको, अभिभावकले खोजेको शिक्षा प्रदान गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौं । त्यो सँगै यो विद्यालयले पछिल्लो समयको माग अनुसारको शिक्षालाई पछ्याई रहेको पनि छ । हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई सक्षम बनाउन लागि परेको छौं । अनुशासित, योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्ने विद्यालयको रुपमा प्रयत्नशील विद्यालयको रुपमा चिनाउन चाहान्छु ।
तपाई यो विद्यालयमा आउनु अघि र पछिको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरा म यो विद्यालयमा प्रवेश गरेको भर्खरै पाँच वर्ष भएको छ । पहिले पनि विद्यालय चलेको थियो । म आएपछि संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा सुधार गर्न तर्फ लागेको छु । अहिले पनि त्यो काम निरन्तर जारी छ । पहिले करिब ५ सय विद्यार्थी थिए । अहिले कक्षा ११ र १२ गरेर करिब २ हजार विद्यार्थी यहाँ छन् । त्योसँगै शिक्षाको गुणस्तरको पनि विकासलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सबै शिक्षक कर्मचारीले काम गरिरहनु भएको छ ।
हामीले प्रत्येक वर्षको नतिजा उत्कृष्ट ल्याएका छौं । नगर भित्रका १ सय ४५ वटा सुचकलाई पुरा गरेर नगरको नमुना विद्याललयका रुपमा घोषित भएका छौं । त्यो हाम्रा लागि अत्यन्त खुशीको कुरा हो । यो विद्यालयमा अहिले विज्ञान विषय, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्यिुटर साईन्स, शिक्षा संकायको अध्ययन गराईरहेका छौं । हामीले प्राविधिक विषय बाहेका सबै विषय अध्ययन गराएका छांै ।
विद्यालयको राम्रा पक्षको विकास कसरी गर्नुभयो ?
विद्यालय परिवारले सधै विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा बहस र छलफल गरिरहन्छ । सबैले देशका अरु विद्यालयले कसरी काम गरेका छन्, हामीले राम्रा कामको सिको पनि गर्ने गर्दछौं । त्यो बाहेक हामीले विद्यालयमा अनुशसित वातावरण निर्माण गरेका छौ । अभिभावकसँग हामी यति नजिक छौं कि, एक दिन विद्यार्थी विद्यालयमा आएन भने हामीले अभिभावसँगबाट हामीले त्यसको कारण पत्ता लगाउने गर्दछांै ।
विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मन एउटै भयो भने राम्रा काम गर्न सहज हुन्छ । हामीले साना कक्षाका बच्चाहरुको विकासका लागि आमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछौं । सबै साना विद्यार्थी आमाहरुलाई विद्यालयमा डाकेर बच्चासँग कस्तो व्यवहार गर्ने खाने, बोल्ने र उनीहरुका आनिबानीका विषयमा छलफल चलाउने गरेका छांै ।
त्यसैगरि परिक्षामा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल शिक्षकलाई हामी उत्कृष्ट शिक्षकको रुपमा सम्मान गरेर हौसला बढाउने काम गरेका छौं । विद्यार्थीलाई पनि हामीले परिक्षमा राम्रो गर्नलाई मासिक शुल्क मिनाह गर्ने गरि प्रोत्साहन गरिरहेका छांै । त्यसैगरि हामीले शिक्षकको सुविधालाई औषत विद्यार्थीको उपलब्धीसँग जोडेर हेर्न गरेका छांै । उपलब्धी बढ्यो भने शिक्षकको सुविधा पनि बढाउने गर्दछांै । हामीले विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानसँगै नैतिक शिक्षा र खेलको माध्यमबाट पनि अध्ययन गराउने गरेका छौं ।
विद्यालयको तहगत सिकाई उपलब्धीको समीक्षा गर्दा कुन विषयको राम्रो र कुन विषय कमजोर देखिएको छ ?
हाम्रो विद्यालयको पछिल्लो नतिजालाई हेर्दा तहगत सिकाई उपलब्धीमा सबै कक्षामा नेपालीमा राम्रो र गणित विषय कमजोर देखिएको छ । नेपाली हाम्रो मातृभाषा भएर पनि हुन सक्छ विद्यार्थीले छिटो बुझने र लेख्न पनि सक्ने भएकाले पनि समस्या छैनन् । तर गणित विषयलाई हामीले क्रमशः सुधार गरिरहेका छौं । बेला बेलामा परिक्षा लिने र विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएसम्म पुन परिक्षाको व्यवस्था गरेर सुधारका लागि काम गरेका छौं ।
विद्यालयमा तपाईले चाहेको तर गर्न नसकेका कामहरु के के छन् ?
मैले विद्यालयमा चाहेर गर्न नसकेको काम भनेको पहिलो विद्यालयको भौतिक संरचना हो । त्यसपछि पर्याप्त मात्रामा यातायात र शिक्षक दरबन्दी हो । यसका लागि पहल भईरहेको भौतिक संरचनाका लागि पनि अहिले काम भइरहेको छ । हामीले नमुना विद्यालयका लागि डिपिआर तयार गरेर यो वर्ष करिब १ करोड ५० लाखको काम गर्ने योजनामा छौं । अरु विषयमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको साथ र सहयोगमा कामहरु भईरहेका छन् । त्यसका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको सहयोगले मात्र हाम्रा योजना पुरा गर्न सकिन्छ ।
अपडेट : 2021-11-29 18:42:46
विपद्को सिकाइलाई प्रेरित गर्न शैक्षिक पोस्टर
पब्लिकका पूर्व विद्यार्थीहरुको शनिवार बृहत भेला हुँदै